China Nhoroondo yeanoraswa magurovhosi magadzirirwo vagadziri uye vanotengesa | ORIENT
1. Nhoroondo yekwakatangira magurovhosi anoraswa
Muna 1889, magorovhosi ekutanga akaraswa akazvarwa mukiriniki yaDr.William Stewart Halstead.
Mukuita kwekuvhiya, magurovhosi anoraswa haakwanise chete kuona kushanduka kweruoko rwechiremba, asi zvakare kunatsiridza zvakanyanya hutano hwekuchengetedzwa kwenzvimbo yekurapa. Magorovhosi anoraswa muchiremba anovhiya muboka iri anozivikanwa zvakanyanya.
Mukuedza kwenguva refu kwekiriniki, magurovhosi akaraswa akawanikwa aine basa rekuparadzanisa hosha dzinotakurwa neropa, uye iyo Occupational Health and Safety Administration yaisanganisira midziyo yekuzvidzivirira pakaitika chirwere cheAIDS muna 1992.
Magorovhosi anoraswa akaberekerwa muindasitiri yezvokurapa, kuvharisa magurovhosi ekurapa zvakare akaomarara, nzira dzekuvharisa dzinozivikanwa ndidzo mbiri dzinotevera:
1) Ethylene oxide sterilization - iko kushandiswa kwekurapa kweiyo ethylene oxide sterilization tekinoroji kunogona kuuraya tupukanana tese, kusanganisira mabhakitiriya spores, asiwo kuona kuti magurovhosi haasi pasi pekukuvara;
2) Gamma-ray sterilization - radiation sterilization ndiko kushandiswa kwemagetsi emagetsi anogadzirwa nemagetsi emagetsi kuti auraye zvinhu zvakawanda pahutachiona. Iyi inzira inoshanda yekudzvinyirira kana kuuraya utachiona kuti huve nehurefu hwekuita mbanje, mushure mekunge gamma-ray yabvisa maBacteria magiravhusi kazhinji akachena zvishoma.
3. Kupatsanura kwemagurovhosi anoraswa
Sechikamu chevagari vane yakasarudzika latex allergies, magurovhosi vagadziri vari kugara vachipa dzakasiyana siyana mhinduro, idzo dzinobva kwakasiyana-siyana dzinoraswa magurovhosi.
Zvinoenderana nezvinhu zvakasiyana, magurovhosi anoraswa anogona kukamurwa kuita: Magorovhosi eNitrile, Magiravhosi eLatex, Magurovhosi ePV, magurovhosi epa ... ... kubva pamusika mamiriro ekuona, magurovhosi enitrile zvishoma nezvishoma anova akakurisa.
Pakupedzisira, ORIENTMED inogona kupa magurovhosi akasiyana, zvichibva pamutengo wemakwikwi. Kune hutano, basa rehunyanzvi tichaita zvirinani!